Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ German Emre nwere ike ịbụ nwata Akụkọ Plus abụghị eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara aha na aha njirimara; 'Onye na - arụ ọrụ'. Anyị Emre nwere ike Childhoodmụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Ex-Liverpool na ndị ọkachamara na German ọkachamara na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ mmekọrịta ya, ndụ ezinụlọ ya na ihe ndị ọzọ a ma ama banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya mana ole na ole na-atụle Emre Can's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Emre nwere ike ịbụ nwata akụkọ - Ndụ mbido na ezinụlọ:
Emre Can mụrụ na 12th nke Jenụwarị 1994 na Frankfurt, Germany. A na-akpọ aha nna ya 'Chan'. Emre mụrụ na ndị nne na nna si mba ọzọ kwabata na Frankfurt, Germany. Nwere ike tolite na-eso nkuzi nke Islam.
Ọ bụ nwa ewu nwere ike ime ihe ka ukwuu n'oge ọ bụ nwata na-ele bọl, ihe nkiri na igwu egwuregwu vidio.
Ọ bụ otu n'ime ndị si mba Tọki kwabatara na-enye ohere ịgba bọọlụ ntorobịa ịgba bọọlụ na SV Blau-Gelb bọọlụ bọọlụ, Frankfurt. Ejigidere ya mgbe ọ gosipụtara nnukwu arụmọrụ dị ka ụmụ amaala ụmụaka.
Mgbe ahụ ọ dị afọ isii. Emre nọrọ na klọb ruo 2006 mgbe ọ banyere ụlọ akwụkwọ ntorobịa ọzọ, Eintracht Frankfurt.
N'oge ya na klọb Frankfurt, a kpọrọ ya 'ndị ọrụ dịgasị iche' n'ihi ike o nwere ịrụ ọrụ nke ọma na ọnọdụ ọ bụla nke etiti.
Na 2009, mgbe ọ dị afọ 15, ọ kwagara Bavaria mgbe Bayern Munich bịanyere aka na ya. Nchịkọta Ọrụ ga-aga n'ihu… Ugbu a, ka anyị gaa nke ọzọ.
Ọnye na-bụ Maria Cataleya? Onye hụrụ Emre Can n'anya:
Onye gosipụtara na ọ nwere ike ịlụ. Na nyocha nke aka anyị, anyị chọpụtara na ọ bụghị ya. Nke a bụ enyi nwanyị Emre Can, Maria Cataleya n'oge ọ na-ede Bio.
Nwere ike ịnụ ụtọ oge ọwụwa anyanwụ na ịhụnanya maka ndụ ya. N'ezie, ọ na-ebi ndu ịhụnanya zuru oke yana mmekọrịta mmekọrịta obi ụtọ na ọmarịcha gal. Ọ bụghị naanị na Maria mara mma nke ọma kamakwa ọ nwere nkà asụsụ. Ọ na-asụ German nke ọma.
A na-edebe akụkọ mgbasa ozi mgbasa ozi Maria na nzuzo. Nke a pụtara na ọ bụ onye nzuzo nke onwe ya n'adịghị ka ọtụtụ ndị nwunye na ndị enyi nwanyị (Wags).
Emre Nwere Ike Ndụ Ezinụlọ:
Site n'ile anya n'aha ya, ị ga-aghọta na ọ bụ nke Turkish. Aha 'Emre' n'aka 'Enyi' na Turkish mgbe 'Nwere ike' n'aka 'Smmụọ, Ndụ, ma ọ bụ Obi '.
Dị ka o kwesịrị, Emre si n'ezinụlọ ndị gbara ọsọ ndụ Turkish. Nke a site na itinye aka pụtara na ọ ga-abụ na nne na nna ya aha ya bụ Mr na Mrs Can nwere nzụlite dị ala ma ọ bụ nke obere.
Ndị nne na nna Emre hapụrụ Turkey gaa Germany iji nweta ndụ ka mma ma chebe ọdịnihu maka ụmụ ha (Emre, nwanne ya nwoke na nwanne ya nwanyị).
dị nnọọ ka Mesut Ozil, Emre bụ onye na-arụsi ọrụ ike na obodo Turkish Turkish.
Emre Nwere Ike Okpukpe:
Emre bụ onye ụka site n'okwukwe. Ọ bụ n'etiti ọtụtụ ndị Muslim na-agba ọsọ ụkwụ.
Emre Can: Onye okpukpe Alakụba.
Emre nwere ike ịbụ Eziokwu akụkọ - ngwakọta ngwakọta:
Emre Can bụ ngwakọta atọ nke atọ egwuregwu German dị ukwuu.
A na-ejikarị ya tụnyere onye na-eme egwuregwu Midia Germany bụ Bastian Schweinsteiger, n'ihi ike ya ịgbanwu site na mbuso agha iji nweta nchebe.
Ọ na-etokwa oke égbè dị ike ma nwee ike ịkasi obi na oge nke egwuregwu. Nke a na-eme ka atụnyere Toni Kroos. Ike ike ịwakpo na ịgbachitere site na etiti hụrụ ya ka e jiri ya tụnyere German Legend Michael Ballack.
Emre Can Bio - Ọrụ na Nchịkọta:
Nke a bụ n'ihu site na ebe anyị kwụsịrị.
N'ime afọ mbụ ya na agụmakwụkwọ Bayern, enwere ike iji ya mee ihe na etiti tupu ya alaghachi na midfield mgbe ọ malitere igwu egwu Bayern Munich II na Regionalliga Bayern. O mere egwuregwu izizi mbụ ya na 2012.
Ya na Bastian Schweinsteiger, Luiz Gustavo na Javi Martínez gbara aka maka ebe di n'etiti Bayern. Ọ bụghị enweghị talent kama asọmpi na Allianz Arena mere ka ọ pụọ.
Nwere ike ime naanị ọhụụ asaa ọhụụ tupu ị banye maka onye otu Bundesliga n'akụkụ Bayer Leverkusen na 2013 na-achọ oge egwuregwu oge niile.
Omume ya mgbe ọ nọ na Leverkusen kpaliri mmasị site na Liverpool Liverpool, bụ onye kwalitere nkwupụta nke £ 9.75 million (million 12 million). Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Daalụ maka ịgụ Emre Can Nwatakiri Akuko na akuko ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!